Lixaa Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa Obbolaa lamaan dabalatee nama ajjeesuu itti fufe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLixaa Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa Obbolaa lamaan dabalatee nama ajjeesuu itti fufe.
Lixaa Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa Obbolaa lamaan dabalatee nama ajjeesuu itti fufe.
Lixa Oromiyaa Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii keessatti halkan edaa Amajji 10,2021 tti waraanni mootummaa obbolaa lama shamaraa fi dhiira kan ta’a waraanni mootummaa ajjeesee buluu isaa gabaasan. Obbolaa waraanni ajjeese kunneen Garramuu Biyyaarraa fi Meetii Biyyarraa kan jedhaman yoo ta’u; obbolaan lamaan mana jireenyaa isaanii keessatti waraana mootummaan ajjeefamuu isaanii nuuf himan.
Gabaasaan keenya akka nuuf himetti obbolaa kanneen badii malee mana isaanii ol itti seenuudhaan waraanni PP ajjeesuu isaa nuuf ibsaniiru. Gabaasa wal fakkaatuun Waraanni Milishaa mootummaa Lixa Oromiyaa Wallagga Lixaa Gimbii keessatti nama Umuriin isaa waggaa 16 ta’e ajjeesuu isaaniitu ibsame. Barataa kutaa 7ffaa kan ta’e Amaanu’eel Darajjee Tottoobaa jedhamu barata Mana barumsaa aanaa Gimbii Waaloo Yesuusii qaamni mootummaa ajjeesuu gabaasan.
Taateen du’aa kun Dilbata Kaleessaa Amajji 10,2021 ta’uus nuu himan. Waraanni Milishaan mootummaa mucaa kana badii tokko malee utuu ganamaan manaa bahee deemaa jiruu “dhaabadhu! Harkaa kee ol kaasi” erga jedheen booda rasaasa lama itti naquun ajjeesuu isaa nuu himan.
Mucaa kana erga ajjeesanii booda namootni akka itti hin siqnee dhorkuudhaan, sa’atii dheeraa reeffi isaa bakkee turee goondaan (miixiin) itti nam’itee lafa qabanii ol kaasan illee dhabani uummati heddu rakkataa akka ture gabaasaniiru.
Guutummaa Oromiyaa golee arfan keessatti qaamolee mootummaatiin ajjeechaan uummata irra gaha. Ajjeechaa guyyuu gabaasaa kan turre irraa nii hubatama. Ammallee ajjeechaan daranuu itti fufee jiraachuu gabaastonni keenya nuu ibsaniiru.
#Akeekkachiisa miti tarkaanfiif dorgomee kan mo’ateedha.
lixa wallaggaa magaalaa gimbii ganda 03 namtittiin maqaan ishee BULCHAA TAADDASAA jedhamtu yeroo magaalaa gimbii keessa jiraachaa turtes nama sabboonummaa qabu fakkaattee dhiiga nama hedduufi lubbuu namoota hedduu galafatte akkasumas reebichaafi hidhaan nama hedduu dararaa turte.sana booda taayitaa kennaniifi waajjira gandaas seentee hojjechaa turte.erga asii dirqamasheen fixattee basaasummaadhaa
gara buraayyuutti ol guddisanii achittis lubbuu fi dhiiga qulqulluu meeqa balleessite,magaalaadhuma buraayyuu keessatti qaama mootummaa waliin kan deemee mana seeraan ala ijaarame jedhee manni dureessotni ijaaraan meeqa osoo jiruu mana miskiinootaa kan diigaa ture bulchaa taaddasaa isa tokkodha,torban lamaan kanammoo fuula fb isaarratti shaneen isin jettan merreree?yeroo amma raayyaan ittisa biyyaa hin jirretti maaf godina oromiyaa keessaa to’achuu maaf dadhabe.jettee fb isheetiinis ta’ee bilbilaan namoota meeqa sammuu dhukkubsaa jirti.
jecha namtittii keessaa kan isheen irra deddeebiin fuula fb isheerratti maxxansitu fuuldurri keenya ifa kaayoon keenya badhaadhina jetti.kana malees bulchaa taadasaa namoota kanaan dura magaalaa gimbii keessaa sabboonummaasaanii beektu buraayyuu teessee yeroo ammaa nama meeqa mana hidhaatti guursisaa jirti.nama hedduus akka qabaman maqaa namootaa komaandi poostii godinaaf dabarsitee kenniteetti.abbootiin qabeenyaa namni ani ammaaf maqaasaanii kaasuu hin feenes
qabamuu keessan hin wayyuutii qofaa qofaa keessanitti maallaqa kuma shantama shantama qopheessaa jedhee mootummaa shiftaa kanaa wajjin walii galee nama saamaa jira.nama kanaaf kanaan duras hojiisaa ciigaasisaa kanarraa akka deebi’uuf marsaa 3 akeekkachiisa laanneefi turre namtittiin dubbii keenya bookee gurra harbaa seente gootee bira darbite.kanaaf waan ati goote hundumaaf gatii si madaalu ni argatta.yeroo dhihootti nu eegi.!!
Risaa Lixa SHaggar
Anfilloofi Muggii keessatti guyyaa tokkotti nama 59 namni ficcisiise kol.Allaminew Mollaa jedhamu Lola Tigirayii irraatti ajjeefame kunoo nafiin awwalata jirti!
Siin jettii ijoolleen kee.
Anaatu siif dhaqqabee hin roorrifamtu lamuu
Bakka kan keen siif du’a lafeenkoo sif haa cabu
Diina si mankaraarsu sirraan qola hidhadhee
Ati boojuu lakkaa’ii kaniin irraa hiikkadhee!
Jettee dhaadatti ilmaan kee diinarra ijaajjitee
Oromoo of duuba hin laaliin ijaan kana argitee!